Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Majesty King Carl XVI Gustaf, King of Sweden – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Majesty King Carl XVI Gustaf, King of Sweden
U Kyaw Zwar Minn, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Sweden, presented his Credentials to His Majesty King Carl XVI Gustaf, King of Sweden, on 18 November 2014 in Stockholm.
Dated. 23 November 2014
ဆွီဒင်နိုင်ငံံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စွာမင်းသည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စတော့ဟုမ်းမြို့၌ ဆွီဒင်နိုင်ငံ သောဠသမမြောက်ဘုရင် ကားလ် ဂပ်စ် တပ်ဖ် ထံံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်